Photoshop an-tserasera eto Madagasikara
Photoshop an-tserasera - Azonao atao ve ny mamorona ny sary tianao amin'ny programa fanofanana an-tserasera?
Photoshop an-tserasera no dingana voalohany amin'ny fianarana Photoshop. Raha tsy manana famantarana momba ny Photoshop ianao dia izao no fotoana farany hianarana ny fototra. Misy fiasa fototra sasantsasany azo jerena maimaimpoana. Ny sasantsasany amin'ireo fiasa mandroso kokoa toy ny fampifangaroana sosona sy ny fikotranana Brush dia tsy misy afa-tsy amin'ny famandrihana.
Photoshop an-tserasera dia manome fampianarana video maimaim-poana maro, na lesona an-tsoratra na an-tsary. Maro amin'ireo fampianarana video ireo no novokarin'ny mpamorona Photoshop matihanina. Ny tombony amin'ireto fampianarana an-tsary ireto dia ny manome anao ohatra tena hita maso momba ny zavatra tokony hataonao amin'ilay rindrambaiko. Ireo fampianarana video dia misy amin'ny fiteny maro koa izay manamora ny fidirana sy ny fanarahana azy ireo.
Photoshop dia programa famolavolana sary sarotra nefa mahery vaika. Misy lafiny maro amin'ny fitaovana fanovana sary izay tsy hitan'ny vao manomboka, fa tena ilaina tokoa ny mahafehy azy ireo. Ny zava-dehibe indrindra amin'ireo dia ny palette layer. Eto no ahafahanao manodinkodina ny sarinao.
Misy faritra maro samihafa azonao zahana rehefa mampiasa Photoshop ianao. Ny iray amin'ireo faritra lehibe dia ny interface interface. Misy karazany maro ny fampiasa amin'ny mpampiasa hisafidianana. Ireo fampianarana an-tsoratra dia misy amin'ny fomba maro samihafa. Ny sasany amin'ireo fampianarana an-tsoratra dia mifantoka amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo sosona raha ny hafa kosa mifantoka bebe kokoa amin'ny famonoana borosy.
Ny sehatry ny fifantohana manaraka ho an'ny mpampiasa dia ny lamba anaovanao ny kanto apetrakao. Mandritra ny fiarahanao miasa amin'ny Photoshop an-tserasera dia azo atao ny mizaha ireo fiasa fototra amin'ny fitaovana fanovana. Ireo fitaovana ireo dia misy ny fitaovana Heal, Mask, Brightness ary Darken. Azonao atao ny manandramana amin'ireo fiasa fototra ireo. Ireo fampianarana misy amin'ny Internet dia hampiseho aminao ny fomba fampiasana ireo fitaovana ireo amin'ny fomba mandaitra.
Ny ampahany manaraka amin'ny interface dia manome anao fifehezana lehibe amin'ny fitaovana fanovana sary. Ny Brush Strokes dia manome ny mpamorona fotoana mahafinaritra hamoronana vokatra tena mahaliana. Azonao atao ny manampy loko amin'ny alàlan'ny paleta loko misy amin'ny Internet. Ny safidy ambadika azo alaina ao amin'ny Channel Style Editor dia manome fotoana tsara ho an'ny mpamorona sary hamorona vokatra mahaliana. Manandrama amin'ireto faritra ireto ary jereo ny fomba hampiasanao ireo fitaovana hahasoa anao.
Ny zavatra tokana mila azonao antoka dia ny fanananao ny kinova Adobe Photoshop. Ny zavatra hafa ilainao hahazoana antoka dia ny fametrahana ny kinova farany. Tsy misy mahasosotra kokoa noho ny misintona Photoshop an-tserasera ary mahita fa tsy mandeha tsara ny kinova nofidinao. Alao antoka fa namaky tsara ny torolalana rehetra ianao.
Ny fahaizana manitsy ny sarinao an-tserasera dia nanova ny fomba fiasan'ny mpamorona sary. Tsy mila mankany amin'ny sekolin'ny sary eo an-toerana intsony ianao hahazoana ny fahaizana ilainao. Mora ny mianatra ireo programa an-tserasera ireo, manana torolalana tsotra, ary malalaka ny maro amin'izy ireo. Fanandramana amin'ireo fiasa samihafa izay misy amin'ny Internet ary manatsara ny fahaizanao manitsy.
Photoshop no programa solosaina malaza indrindra amin'ny fanitsiana sary. Saika ny mpampiasa PC rehetra dia amin'ny fotoana iray na hafa misintona ary hampiasa Photoshop. Raha mbola tsy niara-niasa tamin'ny Photoshop taloha ianao dia tokony tena manandrana misintona sy manandrana an'ity programa ity. Ny zavatra lehibe momba ny programa fanovana sary an-tserasera dia ny manampy anao hianatra ny fomba hanaovana ny zava-drehetra manomboka amin'ny fampidirana sary vaovao ka hatramin'ny fanitsiana sary ratsy ka hatramin'ny fanaovana background.
Ireo fiasa fanovana sary izay azo jerena an-tserasera dia tena fototr'izany, saingy tena ilaina avokoa izy rehetra. Na dia vao manomboka aza ianao dia tsara ny manararaotra ireo fampianarana misy. Ny ankamaroan'ny fampianarana an-tserasera dia hitety anao amin'ireo seho fandaharana fototra mandra-pahazoanao aina amin'ny asa sarotra kokoa. Rehefa dinihina tokoa, tsy misy zavatra mahasosotra kokoa noho ny manandrana mianatra zavatra iray fotsiny mba ho sosotra satria toa tsy azonao ilay izy. Raha miasa miaraka amina programa toa ny Photoshop ianao, zava-dehibe ny hahafantaranao ny fanovana ireo ampahany tsy ilaina amin'ny sarinao.
Ny iray amin'ireo fiasa tsara indrindra azo jerena amin'ny Internet dia ny endri-javatra manafatra sy manondrana. Afaka manafatra sary ao amin'ny Photoshop ianao amin'ny loharano maro samihafa. Ireo loharano ireo dia mety ahitana mivantana avy amin'ny fakantsary nomerika anao na azonao ampidirina amin'ny programa amin'ny Internet. Mora ny mamorona rakikira iray manontolo amin'ny sary tokana amin'ny fampiasana ny endri-javatra fanafarana sy fanondranana. Ireo fitaovana fanovana sary azo jerena an-tserasera dia mitovy amin'ireo ao amin'ilay rindrambaiko tena izy, izay manamora ny fanabeazana ho an'ireo vao manomboka.
Rehefa vitanao ny mianatra mampiasa Photoshop an-tserasera dia mety ho liana ianao hianatra momba ny fomba hanamboarana bebe kokoa ny programa fanovana sary. Misy ambaratonga maro samihafa amin'ny fampiasa an-tserasera. Ny mpampiasa manomboka dia afaka manokatra sary mora foana amin'ny totozy fotsiny ary manova. Raha te-hanitatra ny fahaizanao zavakanto ianao dia afaka mamorona sary manaitra miaraka amin'ny sosona. Ireo mpanonta sary dia misy amin'ny Internet amin'ny endrika isan-karazany, ka na inona na inona fahaizanao mana-kanto dia ho hitanao ny karazana programa mety aminao.